About Us - Shanghai Cwenga Ihhotela Supplies Co., Ltd
S hanghai Cwenga Textile Limited, njengoba ehamba phambili professional ehhotela nendwangu nomkhiqizi e East China, sigxila kule ndawo eminyakeni engaphezu kuka-15. Imikhiqizo yethu eyinhloko kuhlanganise: embhedeni ehhotela elinemishwe, ihhotela amathawula, ihhotela Izinsiza, F & B namashidi abanye. Sisabalalisa ephelele nendwangu izixazululo amaqembu ehhotela, izindiza, kufika imikhumbi, izibhedlela.
T hrough ejenti ethu emhlabeni wonke kanye nabasabalalisi bawo manje thina ukunikezela nendwangu amaqembu amaningi emhlabeni odumile ehhotela, ezifana InterContinental, Marriott, Hilton, Starwood, Hyatt, Shangri-la njll Thina ukuthekelisa zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-25.
O ehhovisi yokuthengisa ur kanye Logistics inkonzo zitholakala ngesiShayina yedolobha lanamuhla - Shanghai, futhi enza ethu esifundazweni Central China. It asisekele eziphansi kanye okusezingeni eliphezulu insizakalo nekghono.
M -ore kuka engu-15 ehhotela ukunikezela isipiliyoni, iminyaka 10+ professional izihambi yendwangu ifektri operation, okuzokwenza ukukunikeza engcono yokuthengisa service, izinga ozinzile futhi amanani abiza. Sibheke phambili babe win win ngokubambisana neNhlangano abasabalalisi emhlabeni wonke, ama-ejenti, amaqembu ehhotela!